डा.गोविन्द के.सी को ९:३० बजे अनसन तोडिने,यस्ता छन सहमति
काठमाडौं,२५ असोज । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ८बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले शनिबार मध्यरातमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।